Ciidan ka gadooday maamulka Puntland oo xoog ku qabsaday Banki iyo madaxtooyada laga...!! - Caasimada Online
Home Warar Ciidan ka gadooday maamulka Puntland oo xoog ku qabsaday Banki iyo madaxtooyada...
Ciidan ka gadooday maamulka Puntland oo xoog ku qabsaday Banki iyo madaxtooyada laga…!!
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Waxaa maanta gadoodey ciidamada Daraawiishta gobolka Mudug, gaar ahaan kuwa fadhigoodu yahay deegaanka Godod.
Ciidamadan ayaa la sheegey iney saaka aroortii ku waabiristeen magaalada Galkacayo oo uu ku sugan yahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas iyagoo qabsadey xarunta Bangiga dowlada ee ku taal magaalo madaxda gobolka Mudug.
Xarunta Bangiga ayaa wararku xusayaan in ciidamadaan weli gacanta ku hayaan iyagoo sheeganaya mushahar gaaraya Todobo bilood, halka dhinaca kale qabsadeen dhisme la sheegay in laga dhisayo madaxtooyo kasoo dhowaan laga bilaabey magaalada Galkacayo.
Shaqaalihii goobtaas dhisayey ayaa wararku sheegayaan in ciidamadaan kala eryeen iyaga oo tilmaamey iney tahay arrin lala yaabo in dhismayaal noocaan ah laga bilaabo magaalada iyadoo xuquudii ciidamada maqan tahay muddo todobo bilood ah.
Cabdinuur Cabdullaahi oo sheegay inuu yahay taliyaha ciidamada gadooday oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay inaysan mushahaar helin muddo dhan 7 bilood.
Dowladda Puntland ayuu tilmaamay inay muddo kala hadlayeen say u heli lahaayeen xaqooda, balse la iska dhagatiray.
Waxa uu sheegay hadii ay xukuumadda ka waayaan jawaab inay samayn doonaan tallaabada dantoodu ku jirto, maadama sida uu hadalka u dhigay gacanta ku hayaan goobi hantida dowladdu taallay.
Gadoodka ciidamadaan ayaa ku soo beegmaya xili magaalada uu ku sugan yahay madaxweyne Gaas oo sheegey in Galkacayo laga qabanayo mashaariic lagu hurumarinayo xarunta gobolka Mudug.
Madaxweynaha Puntland ayaa inta uu booqashooyinka ku marayey degaano kamid ah Mudug ciidamadaan ku booqdey halka la yiraahdo Godod.
Gadoodkaan ayaa imaanaya maalmo kadib markii magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe ciidamada Puntland ee ku sugan bilaabeen iney ka cawdaan mushahar la’aan baahsan.